Magaala Gondaritti Uummatni Ajjeecha Kaleessaa Injiner S.B Irratti Rawwaatame Mormuuf Hidhannoo Guutuu qabatee – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMagaala Gondaritti Uummatni Ajjeecha Kaleessaa Injiner S.B Irratti Rawwaatame Mormuuf Hidhannoo Guutuu qabatee
Magaala Gondaritti Uummatni Ajjeecha Kaleessaa Injiner S.B Irratti Rawwaatame Mormuuf Hidhannoo Guutuu qabatee
Magaala Gondaritti Uummatni Ajjeecha Kaleessaa Injiner S.B Irratti Rawwaatame Mormuuf Hidhannoo Guutuu qabatee Sagalee Isaa dhageessufachaa jira, Qaamni nageenya Eegsisus meesha Hidhatee Uummatnis meesha qabatee, nageenyan walin mari’achaa jira, Kana irraa Keenyi maal baruu qaba?
Yuunibarsiitii Ambootti Warraaqsii Mormiin Ajjeechaa Uummata Keenyarraa dhaabbachuj qaba jechuun kaleessa eegalee har’as akkuma itti fufetti jira. Mootummaan gadi bahee labsii ajjeechaa dhaabuu baasee labsuu qaba!!
“Jijjiiramni salphaa mitii; gatii nama baasisu qaba. Ammoo kan darbe irra kan dhufu, jabaa ta’uu mala. Ammas, wssnti hedduu itti yaadamu malee karaan itti jirtan hedduu isin hin deemsisu. Fira qabsoo guddifachuun dhimma guddaa dha; madaalliin humnaa amma illee warruma abaaraman bira jira. Kun dagatamuu hin qabu.
#ABOn dursee himee jira; waan hin Jijjiiramne irraa Jijjiiramni hin eegamu.
Humnoonni TPLF riphanii ciisan malee hin duune; bakka ciisanii ka’aa jiran. Guyyuu ummata keenya fixaa jiran. Humna maafiyaa kana hundeen buqqisuuf maloota jiranitti fayaydamuun barbaachisaa dha.
Amma ABO waliin dafanii araara buusunis madaallii humna diinaa caalanii argamuun hojii murteessaa dha.
Yeroon kun yeroo fiigichaa miti; yeroo cidhaas miti. Ciniinsuu jiru kana keessaa bahuuf, itti xiiqeffatanii humna horachuun dirqama ta’a; keessayyuu, ummata keenyaf hedduu barbaachisaa dha. Adaraa, hiree kana hin balleessinaa!!”